Krisp: Kagbuo Ndida Noise Na Nzukọ Oku Gị | Martech Zone
Izu m juputara na nzuko Podcast na oku nzuko. O yiri ka ọ na-abụkarị karịa, oku ndị a nwere mmadụ ole na ole nọ ebe ahụ na-enweghị ike ịchọta ebe dị jụụ. Ọ na-eme m n'eziokwu na-eme m ara.
Tinye Krisp, otu ikpo okwu nke na-ebelata ụda mkpọtụ. Krisp na-agbakwunye agbakwunye agbakwunyere n’etiti igwe okwu gị / okwu okwu yana ngwa nzụkọ, nke anaghị ekwe ka mkpọtụ ọ bụla gafere.
Dabere na mkpọtụ dị iche iche 20,000, ndị ọkà okwu 50,000, na awa 2,500 nke ọdịyo, Krisp mụtara ma mepụta netwọkụ akwara akpọrọ krispNet DNS. Ha mere ka ọ dịwanye mma site na itinye nke anyị nzuzo nzuzo, na nsonaazụ ya bụ nhazi ụda anwansi nke nwere ike ịmata ma wepu ụda ọ bụla.
Krisp bụ nzuzo nzuzo, yana, ebe ọ bụ na nhazi ụda ọ bụla na-eme na ngwaọrụ gị.
Ebe Mkpọpụ mkpọtụ dị bara uru:
Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'ụlọ ma ọ bụ ebe ọrụ ọha
Ndị nkụzi dị n'ịntanetị nwere ike ịnụ ụtọ klaasị na-enweghị mkpọtụ na-amịpụta ụmụ akwụkwọ
Ndị mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike idekọ pọdkastị na-enweghị mkpọtụ dị elu maka ndị na-ege gị ntị
Ime otu nwere ike inwe nzukọ na-enweghị mkpọtụ
Ebe oku nwere ike dịkwuo gị n'ụlọnga arụpụta mgbe ha na-arụ ọrụ n'ụlọ (HBA) ma ọ bụ site na-emeghe ụlọ ọrụ
A ga-etinye Krisp n'enweghị nsogbu na ọkwa ọrụ ma ọ bụ tinye ya na nyiwe na ngwaọrụ gị site na iji SDK ha. N'ezie, a na-etinye sọftụwia teknụzụ olu ike nke Krisp® AI tinyere ihe karịrị 100 nde ngwaọrụ ma ọ ga-emeworị mma karịa ijeri 10 nke nkwukọrịta olu.
Budata Krisp n'efu
Tags: aimkpọtụ azụndabere mkpọtụ kagbuodị mmaneural networkakagbuo mkpọtụ
Ndepụta Uzo mkpirisi keyboard nke Twitter